47 Gbadata nọdụ ala n’ájá,+ gị ada na-amaghị nwoke bụ́ Babịlọn.+ Nọdụ n’ala nkịtị n’ebe ocheeze na-adịghị,+ gị ada bụ́ ndị Kaldia.+ N’ihi na ị gaghị abụkwa onye ndị mmadụ na-akpọ onye na-agbasighị ike na onye a zụtọrọ azụtọ.+ 2 Were nkume igwe nri+ gwepụta ntụ ọka.* Kpupụ ákwà i ji kpuchie ihu gị.+ Chịlie uwe gị na-azaru ala elu.+ Kpughee ụkwụ gị.+ Gafee osimiri. 3 I kwesịrị ikpughe ọtọ gị.+ E kwesịkwara ịhụ ihere gị.+ Ọ bụ ọbọ ka m ga-abọ,+ m gaghịkwa emere mmadụ ọ bụla ebere. 4 “Ọ dị Onye na-agbapụta anyị.+ Jehova nke ụsụụ ndị agha bụ aha ya,+ bụ́ Onye Nsọ Izrel.”+ 5 Nọdụ ala gbachi nkịtị,+ banyekwa n’ọchịchịrị,+ gị ada bụ́ ndị Kaldia;+ n’ihi na ị gaghị abụkwa onye ndị mmadụ na-akpọ Oké Nwaanyị+ nke na-achị Alaeze dị iche iche.+ 6 M wesoro ndị m iwe.+ M merụrụ ihe nketa m,+ m wee nyefee ha n’aka gị.+ I mereghị ha ebere.+ I boro agadi yok dị arọ nke ukwuu.+ 7 I wee na-asị: “M ga-abụ Oké Nwaanyị+ ruo mgbe ebighị ebi, ruo mgbe niile ebighị ebi.” I tinyeghị ihe ndị a n’obi gị; i chetaghị ihe ga-abụ ikpeazụ ha.+ 8 Ugbu a, nụrụ nke a, gị nwaanyị nke hụrụ ihe ụtọ n’anya, nke nọ ala n’obi iru ala,+ nke na-asị n’obi ya: “Ọ bụ m bụ onye dị mkpa, e nweghị onye ọzọ.+ Agaghị m anọdụ ala dị ka nwaanyị di ya nwụrụ, agaghịkwa m agba aka ụmụ.”+ 9 Ma ihe abụọ a ga-adakwasị gị na mberede n’otu ụbọchị:+ ịgbara aka ụmụ na di gị ịnwụnahụ gị. Ihe ndị a ga-adakwasị gị n’uju,+ n’ihi ịgba afa nke jupụtara n’ime gị, n’ihi ọgwụ dị ike ị na-agwọ—n’ụzọ gabigara ókè.+ 10 Ị nọ na-atụkwasị obi n’ihe ọjọọ gị.+ Ị sịwo: “Ọ dịghị onye na-ahụ m.”+ Ọ bụ amamihe gị na ihe ọmụma gị+ dufuru gị. Ị nọkwa na-asị n’obi gị: “Ọ bụ m bụ onye dị mkpa, e nweghị onye ọzọ.” 11 Ọdachi aghaghị ịdakwasị gị; ọ dịghị anwansi ị ma nke ga-egbochi ya. Ahụhụ ga-adakwasịkwa gị;+ ị gaghị enwe ike igbochi ya. Mbibi nke ị na-ahụtụbeghị ga-adakwasịkwa gị na mberede.+ 12 Ugbu a, nọgide n’ọgwụ ị na-agwọ nakwa n’ajọ afa ị na-agba,+ bụ́ nke ị dọgbuworo onwe gị n’ọrụ n’ime ya malite mgbe ị bụ nwata; ka i wee nwee ike irite uru ma eleghị anya, ka i wee nwee ike imenye ndị mmadụ ụjọ ma eleghị anya. 13 Ike ìgwè ndị ndụmọdụ gị agwụwo gị. Ka ha bilie ugbu a zọpụta gị, bụ́ ndị na-efe eluigwe, ndị na-ele kpakpando,+ ndị na-eme ka a mara ihe ga-adakwasị gị mgbe ọnwa ọhụrụ pụtara. 14 Lee! Ha dịzi ka ahịhịa ọka.+ Ọ bụ ọkụ ga-erechapụ ha.+ Ha agaghị anapụta mkpụrụ obi ha+ n’aka ọkụ.+ A gaghị enwe icheku ọkụ nke ndị mmadụ ga na-anya ọkụ ya. A gaghị enwe ọkụ a ga-anọdụ ala n’ihu ya. 15 Otú ahụ ka ha ga-adịrị gị, bụ́ ndị gị na ha dọgbuworo onwe unu n’ọrụ dị ka ndị na-agwọrọ gị ọgwụ+ malite mgbe ị bụ nwata. Ha ga-awagharị wee laa n’ógbè ha n’otu n’otu. A gaghị enwe onye ga-azọpụta gị.+